Kuchengetedza Racking System Vatengesi uye Fekitori | China Kuchengetedza Racking System Vagadziri
Nhovo Kuyerera Rack
Pallet kuyerera rack, isu tinoidanawo kuti ine simba racks, kana isu tichida kuti mapallet kuti aendeswe mushe uye nekukurumidza kubva kune rimwe divi kuenda kune rimwe divi pasina rubatsiro rwe forklift uye uko kutanga mukati, kutanga kubuda (FIFO) kunodiwa, ipapo Pallet kuyerera racks ichava sarudzo yakanakira iwe.
Nhovo Racking System
Pallet racking ndeye yekushandisa inobata yekuchengetedza sisitimu yakagadzirirwa kuchengetedza palletized zvinhu. Kune akawanda marudzi epallet racking, iyo inosarudzika rack ndiyo yakajairika mhando, iyo inobvumidza kuchengetwa kwemapareti zvigadzirwa mumatanho akatwasuka ane akawanda mazinga.
Cantilever racks ari nyore kuisa uye anochinjika ekuchengeta marefu, akakura uye akawandisa masosi kunge matanda, mapaipi, trusses, plywoods zvichingodaro. Cantilever rack ine ikholamu, base, ruoko uye bracing.
Katoni Kuyerera Rack
Katoni Kuyerera Rack inowanzo gadzirirwa yemuchina chishandiso chengetedzo neyakagadzira uye kurongeka kunhonga maitiro ne logistics nzvimbo. Iine zvikamu zviviri: dhizaini dhizaini uye ine simba kuyerera njanji. Rwizi rwekuyerera rwunoiswa panzvimbo yeinjiniya.
Kutyaira mumadhaki kunoshandisa zvakanyanya nzvimbo yakatwasuka uye yakatwasuka nekubvisa nzira dzekushandira matiraki eforklift pakati pemachira, forklifts inopinda munzira dzekuchengetera dzemadhiraivha-mumatura ekuchengetera uye kutora mapallet.
Simbi pallets akakodzera kutsiva zvigadzirwa zvechinyakare zvemapuranga pallets uye epurasitiki pallets. Ivo akakodzera forklift mashandiro uye nyore kuwana zvinhu. Inonyanya kushandiswa kune akawanda-chinangwa pasi kuchengetedza, pasherufu yekuchengetedza
Dzorera Rack Rack
Iyo chaiyo yekuchengetera sisitimu inogona kuwedzera nzvimbo yekuchengetera uye chengetedza yakawanda yekushanda nguva, Push back rack is a system iyo inokwidziridza nzvimbo yekuchengetera nekuderedza maaisles for forklifts uye nekuchengetedza nguva yevanoshanda inomhanya munzira yekumisikidza senge zvinoitika mukutyaira-mukati Racks.
Mezzanine rack inotora mukana weyakagadzika volumetric nzvimbo mudura, uye inoshandisa yepakati-basa kana inorema-basa rack seyakanyanya chikamu, uye yakasimba simbi yakarongedzwa ndiro kana pendi yakapetwa sepasi.